Isu qurxi xaaskaaga adiguna | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
Isu qurxi xaaskaaga adiguna
Ma la socotaa inay xaaskaagu ku farxayso markay aragto adoo jidhkaaga ka shaqaynaya!
Mase ogtahay inay ka diiqadoonayso
Markay ku aragto adoon jidhkaaga ihtimaam siinayn!
Kaama rabto xaaskaagu
Inaad uunsi shidato!
Waxayse kaa rabtaa
Inaad dareensiiso inaad iyada isu qurxinayso!
Ma ogtahay hadaba
Inataas oo dhan inayna marna ragganimadaada wax u dhimayn siday aamin san yihiin niman badani, iyagoo xujo ka dhiganaya is qurxinta iyo iska shaqaynta waxaa loogu talo galay dumarka. Waxay dhahaan nimankaasi, gabadhu waa inay ninka ku qaadataa sida uu yahay, ninka is qurxintiisu waxay ku eegtahay inuu qubaysto, cadaydo & inuu dhar nadiifa xidho.
Tusaalena waxaa inoogu filan saxaabigii waynaa Ibnu Cabaas siduu samayn jiray, markasta oo uu arko xaaskiisa oo isu soo qurxinaysa ama isu soo diyaarinaysa isaga, isna markaa ayuu ku dhaqaaqi jiray inuu isu diyaariyo
cajalad ayaa nolosheyda burburisey Dhadhanka Jacaylka Dhabta ah iyo Guusha Lamaanaha